Iibhotile zoYilo oluCwangcisiweyo
Ziveliswa njani iibhotile zeglasi, uyazi?
Sihlala sisebenzisa zonke iintlobo zeebhotile zeglasi ebomini bethu, iglasi ibhotile intle kwaye iyasebenza, ithande ukubonakala kwayo okucacileyo, kwaye inokusebenzisa ngokupheleleyo iipropathi zayo zomzimba ezilukhuni kwaye zomelele.Kodwa, uyazi ukuba injani iglasi eveliswe ngebhotile? Imveliso ...
Kutheni kukho amaqamza kwiglasi evuthelwa ngesandla?
Le yimveliso evuthelwa ngesandla, inkqubo emisela iipropathi zayo. Kwinkqubo yokuvelisa iglasi eyenziwe ngesandla, isilayidi esitshisayo segilasi sihamba kancinci, kwaye umoya phakathi kweebhloko zeglasi uyakwenza amaqamza ngokwendalo kuba awunakudada ngaphezulu. Amagcisa asebenzisa amaqamza ukuveza ...
Malunga noGonyo lwe-COVID-19
I-COVID-19 isengubhubhane wehlabathi ngoku, ilizwe lethu liphumelele kwiziphumo zokulawula ubhubhane, liphuhliselwe iyeza lokugonya kubo bonke ngoku, Ukuphucula inqanaba lesizwe lokuzikhusela, Ugonyo linyathelo elibalulekileyo kukhuselo lwangoku kunye nomsebenzi wokulawula, ikwindlela efanelekileyo yoku ...
ngomphathi ku 21-04-24
2021-4-22 ， Kwakungumhla oxakekileyo eChengfeng Factory, ngaphandle kweeodolo eziqhelekileyo, kwiimfuno zemithwalo yabathengi, Sileqa ukusebenza ubusuku nemini, sigqibe iiglasi yaseKorea yoku-mug kwangoko kwangoko, silayishe i-20ft ngexesha, Saza salayisha iiglasi zodonga ezimbini ezingama-40HQ kumthengi waseJamani ngemini enye. ...
Malunga IS umatshini iibhotile zeglasi
Ngomnyaka we-1925, injineli yaseHartford yoBukhosi u-Ingle wavelisa umatshini wokwenza ibhotile. Umatshini wokwenza ibhotile unamalungu aliqela azimeleyo, kwaye icandelo ngalinye linokuzenzela ngokuzimeleyo ukwenza imisebenzi yebhotile. Ke nokuba ufuna ukutshintsha ukungunda, nguwe kuphela n ...
Ukusetyenziswa kweglasi yemihla ngemihla kuhlala kwesona sabelo sikhulu kukhuseleko kunye nozinzo, kwaye kunzima ukubekwa ngezinye izinto
1) Iglasi inokuzinza okuphezulu kwemichiza. Njengesikhongozeli sokutya kunye neglasi yesiselo, imixholo ayizukungcola; njengokuhonjiswa kunye neemfuno zemihla ngemihla, impilo yomsebenzisi ayizukulimala. Umzekelo, xa ibhotile yeplastikhi yomntwana ifudunyezwa kwi-110 °, i-bisphenol A wil ...
Ngaba ucinga ukuba zeziphi iibhotile zeglasi ezinombala onokubonisa ngcono kunye nokugcina iimveliso zakho? I-Chengfengglass yazisa ngeebhotile zeglasi ngombala ngoku, wamkelekile ukubonisana. Imibala ephambili eveliswa ngeebhotile zeglasi iluhlaza, imdaka, luhlaza okwesibhakabhaka kwaye icacile. Imibala eyahlukeneyo yeebhotile zeglasi ifezekisiwe ...
Umlomo webhotile ogqityiweyo
Ukusuka kwimbonakalo entsha ye-vintner entsha ukuya kwiewayini ezintle ezivela kumabala amiselweyo, ibhotile yesikere ikufumana ukwanda okumangalisayo kwindawo yentengiso yehlabathi. Okokuqala kwamkelwa eNew Zealand naseOstreliya, isiciko sokujija ngoku sisetyenziselwa i-80% yeewayini ezivela kule mimandla. Ummangaliso ...
Aba-3 kwabane baseYurophu bakhetha iglasi
Ngomhla woLwandle lweHlabathi, Abahlobo beglasi bamema wonke umntu ukuba aphakamise iglasi kwimpilo yeelwandle zethu ngokusungulwa komkhankaso 'woLwandle oluNgapheliyo'. Ngokophando lwakutsha nje olwenziwe ngabahlobo beglasi yaseGrazil, abathathu kwabane baseYurophu bakala iiglasi njengezona zilungele ulwandle ...